महामारी होस् या बाढी पहिरोः मौन रहने यी स्टार – Kavrepati
Home / मनोरंजन / महामारी होस् या बाढी पहिरोः मौन रहने यी स्टार
admin4weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 407 Views
उसो त, सामाजिक कार्य गर्दा प्रचार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । केही प्याकेट चाउचाउ र नुन बाड्दा पनि फोटो खिचाएर ठूलै हल्ला गर्नेहरुको जमात यहाँ खुबै भेटिन्छ ।
अझ, चलचित्रकर्मी त प्रचारका लोभी हुन्छन् । सामाजिक कार्यलाई प्रचार गरेर मिडियामा तारिफ पाउन उनीहरु सधै लालयित हुन्छन् । तर, कलाकारले गर्ने सामाजिक कार्य अरुका लागि पनि प्रेरणादायी हुने भएकाले उनीहरुको सक्रियताको ठूलो अर्थ राख्छ ।
चलचित्र रिलिजको बेलामा दर्शकलाई ‘भगवान’ भन्दै हलसम्म आउन नमस्कार गर्ने चलचित्रकर्मी तीनै दर्शकलाई आपत्त पर्दा कती सक्रिय हुन्छन् ? यसले पनि अर्थ राख्छ ।
तर, नेपाली चलचित्र क्षेत्रका केही स्टार कलाकारको मौनता महामारीमा पनि उदेकलाग्दो देखियो । दर्शकले नै स्टार बनाएका कलाकारहरुले भौतिक रुपमा आफ्नो उपस्थिती त यो समयमा बनाउन सकेनन् नै, सामाजिक संजालमा पनि उनीहरुले यो बिषयलाई खासै महत्व नदेखिएको देखियो । कुनै पनि बिषयमा आवाज उठाउनेदेखि महामारी र बाढी पहिरोको समयमा दर्शकलाई आफू भएको महशुश गराउन धेरै स्टारहरु चुके ।
नायक अनमोल केसीलाई चलचित्र क्षेत्रले ‘मेगास्टार’ भन्ने गरेको छ । नेपाली चलचित्रमा सर्वाधिक महंगो पारिश्रमिक लिने नायक हुन् उनी । तर, महामारी, लकडाउन, बाढी पहिरोको समयमा पनि अनमोल सामाजिक संजाल र भौतिक रुपमा खासै सक्रिय देखिएनन् । बरु, उनी सामाजिक संजालमा विभिन्न विज्ञापनका पोष्टहरु राख्दै प्रमोशनमा नै सक्रिय देखिए । चलचित्र प्राविधिकहरुलाई राहत वितरणमा थुप्रै कलाकार सक्रिय रहँदा उनी यसमा पहिलो चरणको लकडाउन र दोश्रो चरणको निषेधाज्ञामा पनि मौन नै रहे ।
नायक प्रदिप खड्काको सक्रियता पनि यो पाटोमा खासै देखिएन । नेपाली चलचित्र सर्वाधिक महंगो पारिश्रमिक लिने अर्का नायक हुन् प्रदिप । चलचित्र ‘प्रकाश’को छायांकन सकेर काठमाण्डौ फर्किएको भोलीपल्ट नै निषेधाज्ञा भएपछि प्रदिप पनि घरमै रहे । तर, उनको सक्रियता न त सामाजिक संजाल न त भौतिक रुपमा नै देखियो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘स्टार’ नायक भनिने गरेका प्रदिपको मौनता पनि उदेकलाग्दो नै थियो ।
केही समय अगाडि कमेडियन आदर्श मिश्राले नेपाली कलाकारले विज्ञापनको प्रमोशनका लागि सामाजिक संजाललाई प्रशस्त समय खर्च गरेपनि कुनै पनि सामाजिक मुद्दामा एउटा पोष्ट गर्न पनि सकस मान्ने गरेको बताएका थिए । यसपटक, धेरै कलाकारबाट दर्शकले पनि यस्तै महशुश गरेका छन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका केही कलाकार सक्रिय रुपमा सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदा केही ‘स्टार’ कलाकारको मौनता भने दुःखद हो ।
Previous प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद ?
Next अब सधैका लागि छोडेर गए हाम्रा ३ करोड नेपालीको मनमा बसेका यी ब्याक्ति